Himalaya Dainik » के पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु ‘बाघले खाएर’ भएको थियो ?
के पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु ‘बाघले खाएर’ भएको थियो ?
तत्कालीन गोरखा राज्यमा विसं १७७९ पुस २७ गते जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाह २० वर्षको उमेरमा राजा बने।
पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यबारे कस्ता धारणा देखिएका छन् र प्रामाणिक तथ्यहरूले के भन्छन्? बीबीसीको रिपोर्ट :
पृथ्वीनारायणको सेना सजिलै अहिले नेपालको सीमा रहेको मेची नदीपारि परैसम्म पुग्यो। यो सफलताले उत्साहित बनेका उनी फेरि पश्चिमतर्फ आक्रमण गर्नुपर्‍यो भनी नुवाकोट पुगेका बेला अकस्मात् बिरामी परेको ऐतिहासिक लिखतहरूले देखाउँछन्। उनको मृत्यु विसं १८३१ माघ १ गते भएको थियो।
नेपालेश्वर उपन्यासमा पृथ्वीनारायणको मृत्युबारे वर्णन गरिएको छ तर कुन रोग वा के कारणले उनको मृत्यु भएको भन्ने स्पष्ट पाइँदैन।
सिकार खेल्दा उनी साँच्चिकै घाइते भएका भए उनले दिव्योपदेश दिन समर्थ हुन्थे होलान् र? उनले त ‘अब म बाँच्दिन’ भन्ने लागेर रोग लागेपछि बल्ल त्यस्तो उपदेश दिएको देखिन्छ।